बाढीले जिप बगाउँदा: ३ को मृत्यु
बझाङ । बाढीले जिप बगाउँदा बझाङमा ३ जना मृत्यु भएको छ। जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका ७ सुवेडास्थित चौठा खोलाकमा आएको बढीले यात्रुबाहक जीप बगाउँदा तीन जनाको मृत्यु भएको हो ।
से १ ज ८२० नम्बरको खोलामा बुधबार राति ८ बजे आएको ठूलो बाढीले जिप बगाएको थियो । से १ ज ८२० नम्बरको जिप बगाउँदा जिपमा सवार ३ जनाको मृत्यु भएको हो । चैनपुरमा कस्मेटिक पसल सञ्चालन गर्ने खप्तड छान्ना गाउँपालिका २ का ३१ वर्षीय अम्मराज वन, २४ वर्षीय असु ओड र जीपचालक कञ्चनपुर दोधराका २६ वर्षीय रमेश चन्दको मृत्यु भएको प्रहरीले बतायो ।
जीप खोलाले बगाएर झण्डै ५० मिटर तल खोलाको खोँचमा पुरिएको अवस्थामा भेटिएको बझाङ प्रहरीले बताएको छ । अप्ठ्यारो भीर र जीपलाई माटोले पुरिएको हुनाले अाज बिहीबार दिउँसो साढे २ बजेमात्र शवहरु निकालिएको बझाङका प्रहरी प्रमुख डीएसपी ऋषिराम कँडेल बताए ।
प्रकाशित : बिहिबार, बैशाख २०, २०७५१८:०२
बसले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार दुवैजनाको मृत्यु !
काभ्रेमा इँटाभट्टाको पर्खाल भत्किँदा ११ महिने बालकसहित दुईको मृत्यु , २ जना घाइते !
आज काठमाडौँ आसपासका स्थानमा वर्षा हुने , फूल्चोकीमा हिउँ पर्ने सम्भावना !
काठमाडौंको सामुदायिक वनभित्र महिलाको शव सडेगलेको अवस्थामा फेला , पहिचान हुन् सकेन !